Threonine 149 Phosphorylation တိုးမြှင့်ခြင်း ineFosB ကိုကင်းအားစိတ်ဓာတ်တုံ့ပြန်မှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု (၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ
J ကို neuroscience ။ 2014 သြဂုတ် 20; 34 (34):11461-9. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1611-14.2014.
Cate HM1, Thibault M က2, Pfau M က1, Heller E ကို1, လင်းယုန်တစ်ဦးက2, Gajewski P ကို2, Bagot R ကို1, Colangelo ကို C3, အက်ဘော့ T က3, Rudenko, G4, Neve R ကို5, Nestler EJ1, Robison AJ6.
အာရုံခံဗီဇစကားရပ်များတွင်တည်ငြိမ်အပြောင်းအလဲများကိုစွဲပြည်နယ်များပြုပြီအဖြစ်ကိုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့်အတိုးများကူးယူအချက်ΔFosB, အဘယ်သူ၏စကားရပ်နျူကလိယ accumbens အတွက် (NAc), သော့ဆုလာဘ်ဒေသတစ်ခုခြင်းကိုနှင့်တည်ငြိမ် FosB ဗီဇထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါသည်, အလွဲသုံးစားမှုနီးပါးအားလုံးမူးယစ်ဆေးမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်နှင့်သူတို့၏ psychomotor နှင့်အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုထိန်းညှိသည်။
Ser (၂၇) တွင် Phosphorylation သည် BFB ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်ဆေးများကိုအကြိမ်ကြိမ်ထိတွေ့ခြင်းမှဖြစ်ပေါ်စေသည်ur မကြာသေးမီအလုပ်ပရိုတိန်း kinase CaMKIIα SER မှာΔFosB (27) phosphorylates နှင့် Vivo အတွက်၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းညှိကြောင်းပြသသည်။
ဤတွင်ကျနော်တို့CaMKIIαအားဖြင့်စသည်တို့အတွက် phosphorylated ဖြစ်ကြောင်းΔFosBအပေါ်နှစ်ခုအပိုဆောင်းက်ဘ်ဆိုက်များကိုဖေါ်ထုတ် Thr (149) နှင့် Thr (180), နှင့်နာတာရှည်ကိုကင်းများက Vivo ၎င်းတို့၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုသရုပ်ပြပါ။ ကျနော်တို့ရိုင်း-type အမျိုးအစား (WT) ΔFosBနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ alanine mutation မှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှုမထိခိုက်ပါဘူးစဉ် Thr (149) (T149D) ၏ phosphomimetic mutation သိသိသာသာ AP-1 မှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှုတိုးပွါးကြောင်းပြသပါ။
၏ Vivo ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းအတွက်အသုံးပြုခြင်း ΔFosB-T149D သို့မဟုတ်ΔFosB-T149A ဈဎ mouse ကို NAc ကျနော်တို့၏ overexpression စိတ်ပိုင်းဖြတ် osFosB-T149D NAc အတွက် WT ΔFosBမထက်ကိုကင်းများ၏ကနဦးအနိမ့်ထိုးဖို့တုန့်ပြန် သာ. ကြီးမြတ် locomotor လှုပ်ရှားမှုမှဦးဆောင်, overexpression ၏နေချိန်မှာ osFosB-T149A WT ΔFosB၏ overexpression ပြီးနောက်တှေ့မွငျရနာတာရှည်အနိမ့်ထိုးကိုကင်းဖို့ psychomotor ာင်းထုတ်လုပ်ရန်နှင့်အဆင့်မြင့်ကိုကင်းဆေးများမှာထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များတွင်တွေ့မြင်ထိခိုက်လွယ် abrogates ပါဘူး.
ကျနော်တို့နောက်ထပ် Thr (149) ၏ကြောင်း mutation သည်ဤဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေရဲ့အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများကသူတို့ပြောင်းလဲမှတ်တမ်းဂုဏ်သတ္တိများအားဖြင့်မောင်းနှင်သည်ဟုအကြံပြုခြင်း, mouse ကို NAc အတွက် overexpressed ΔFosB၏တည်ငြိမ်မှုကိုမထိခိုက်ပါဘူးသရုပ်ပြပါ။
မူပိုင်ခွင့်© 2014 စာရေးသူ 0270-6474 / 14 / 3411461-09 $ 15.00 /0။
CaMKII; accumbens; ကိုကင်း; phosphorylation; ကူးယူ; δFosB